အမျိုးသားများကအသစ်သော Semen ပမာဏ၊ Motil Sperm ပိုမိုများပြားလာခြင်းနှင့်အသစ်သောအမျိုးသမီးများပုံရိပ်များကိုဖော်ထုတ်သောအခါပိုမိုလျှင်မြန်စွာ (၂၀၁၅) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn On On
မှတ်ချက်များ - ညစ်ညမ်းသောကြယ်တစ်ပွင့်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်သုတ်ရည်လွှတ်မှုနှင့်လှုပ်ရှားနိုင်သည့်သုက်ပိုးများတိုးပွားလာသည်။ ထို့အပြင်သုတ်ရည်လွှတ်သည့်အချိန်သည်သိသိသာသာကျဆင်းသွားသည်။ Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်လိင်မှုဆိုင်ရာမိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်ထိတွေ့သောအခါပိုမိုကောင်းကျိုးသော circuit circuit လုပ်ဆောင်မှုဟုသွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ ဤတွင်လိင်ဆိုင်ရာအသစ်အဆန်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်သုက်ပိုးများနှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်သောသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးပြီး၊ မည်သည့်“ အပိုတွဲဆက်မှု” ကိုမဆိုပိုမိုထိရောက်ပြီးအကုန်အကျများစေသည်။
ရှင်ပေါလု N. ယောသပ်သည်, ဖြစ်သော Rakesh K. Sharma က, Ashok Agarwal, လော်ရာ K. Sirot
မျိုးစိတ်များစွာအတွက်ယောက်ျား differential ရိပ်မိသုက်ပိုးယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမျိုးဆက်ပွားမှုအခြေအနေကိုအပါအဝင်အချို့သောလူမှုရေး variable တွေကိုပေါ်တွင် မူတည်. သုက်ပိုးနဲ့ဟောပြောမှုတွေအရည်ခွဲဝေချထားပေးရန်။ အချို့သောမျိုးစိတ်မှာတော့အထီးတူညီတဲ့အမျိုးသမီးနှင့်အတူထပ်ခါတလဲလဲအိမ်ထောင်ဖက်အပျေါမှာသုက်ပိုးအရေအတွက်သို့မဟုတ်အရည်အသွေး၎င်းတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုလျှော့ချပြီးဝတ္ထုအမျိုးသမီးမှ mated သည့်အခါထိုကဲ့သို့သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြှင့်။ ကျနော်တို့လူသားတွေအတွက် ejaculated သုတ်ရည် parameters တွေကိုအပေါ်နှိုးဆွလေ့နှင့်အသစ်အဆန်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ထဲကနေဆွနှင့်အတူတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမှတဆင့်ထုတ်လုပ်သုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ အထီးတူညီတဲ့အမျိုးသမီးခြောက်ကြိမ်မှအောင်မြင်မှုထိတွေ့ကြသောအခါ, ငါတို့အတူတူအမျိုးသမီးမှပထမဦးဆုံးနှင့်ဆဋ္ဌမထိတွေ့မှုများအကြားသုက် parameters တွေကိုမပြောင်းလဲမှုကိုမြင်တော်မူ၏။ ယောက်ျားတစ်ဦးဝတ္ထုအမျိုးသမီးနှင့်ထိတွေ့သောအခါသို့သော်သုက်အသံအတိုးအကျယ်နှင့်စုစုပေါင်းကောင်းတယ်လို့ဆိုလိုနေတယ်သုက်ပိုးအရေအတွက်သိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည်။ သုတ်ရည်လွှတ်ဖို့အချိန်ကိုလည်းဝတ္ထုအမျိုးသမီးမှထိတွေ့မှုအပျေါမှာသိသိသာသာလျော့နည်းသွားသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုလူ့အထီးပိုမိုလျင်မြန်စွာ ejaculate နှင့်ဝတ္ထုအမျိုးသမီးနှင့်အတူသုက်ပိုမိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
18, ဇွန်လ 2015 အားဖြင့် ယောဟန်သည်ဖင်လန်
WOOSTER, အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ် - စုံတွဲများမှာပြသနာများပြtroubleနာများကြုံတွေ့ရသောအခါများသောအားဖြင့်အကြီးမားဆုံးစစ်ဆေးမှုကိုခံယူရလေ့ရှိသည်။ သို့သော် Wooster ကောလိပ်မှသိပ္ပံပညာရှင်များသည်ယောက်ျားမပွားနိုင်ခြင်းကိုတမင်တကာလျစ်လျူရှုမိနိုင်ပြီးအမျိုးသားများကသူတို့၏သုက်ပိုးအရေအတွက်ကိုအမှန်တကယ်တိုးမြှင့်နိုင်သည်ဟုဆိုသည်။
CleoLand Clinic ၏မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာမှသုတေသီများနှင့်အတူ Wooster မှဇီဝဗေဒဆိုင်ရာလက်ထောက်ပါမောက္ခ Laura Sirot သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ် Wooster ဘွဲ့ရတစ် ဦး ဖြစ်သော Paul Joseph နှင့်နို့တိုက်သတ္တဝါများတွင်တွေ့မြင်ရသောအဖြစ်အပျက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသောစီမံကိန်းတွင်ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသားတစ်မျိုး၏သုက်ပိုးများ၏အရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက်သည်ထပ်တူထပ်မျှအမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ပုံရိပ်များနှင့်ထိတွေ့မှုလျော့နည်းသွားပြီးနောက်ပိုင်းတွင်အသစ်သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ပုံရိပ်များနှင့်ထိတွေ့မှုတိုးပွားလာသောမျိုးစိတ်များအမျိုးသားများသည်အခြားတိရိစ္ဆာန်မျိုးစိတ်များရှိအမျိုးသားများကဲ့သို့ပိုမိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြသည် (ဆိုလိုသည်မှာထုတ်ကုန်များ) အနည်းငယ်မျိုးစိတ်မိတ်ဆက်သောအခါ) motile သုက်ပိုးများများနှင့်အတူသာ။ ကြီးမြတ်သုက်အသံအတိုးအကျယ်) ။ ၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုဇွန်လထုတ်တွင်ထုတ်ဝေသည် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်စိတ်ဓာတ်သိပ္ပံ.
ဂျိုးဇက်နှင့်ဆာရိုတို့သည်ပုံရိပ်အမျိုးမျိုးကို သုံး၍ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးဝတ္ထုရေးသူအမျိုးသမီးများနှင့်မိတ်လိုက်ခြင်းအခြေအနေကိုပုံဖော်ပြီးသုတ်ရည်နမူနာများကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ “ အသစ်သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ပုံများနှင့်ထိတွေ့သောအခါအမျိုးသားများသည်ပိုတက်ဆီယမ်ပိုများသည့်သုတ်ရည်ပမာဏနှင့်အတူပိုမိုမြင့်မားသောရွေ့လျားနှုန်းနှင့်အတူသုတ်ရည်ကိုသုက်ရည်များပိုမိုများပြားစွာနှင့်အတူသုတ်လိမ်းထားကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကဖော်ပြခဲ့သည်” ဟုဂျိုးဇက်ကဆိုသည်။ "ဒီအချက်ကအမျိုးသားတွေဟာသူတို့တွေ့တဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုခွဲစိတ်ပြီးပိုကြီးတဲ့သန္ဓေသားလောင်းထုတ်တဲ့ဝတ္ထုအမျိုးသမီးတစ် ဦး ရဲ့သရုပ်ဖော်ပုံတွေအတွက်ပိုပြီးသုက်ပိုးတွေထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ "
သိပ္ပံပညာရှင်နှစ် ဦး မှတွေ့ရှိချက်များအရဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာဇီဝဗေဒနှင့်လူ့ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာနယ်ပယ်များကိုလည်းထိုးထွင်းသိမြင်စေသော်လည်း၊ ဂျိုးဇက်ဤသို့ပြောပြသည် -“ အထီးကျန်မှုများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်နှင့်မျိုးပွားရန်ရည်ရွယ်သည့်ထုတ်လုပ်သောသုက်ပိုးများသည်ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေနှစ်ခုအောက်တွင်ဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့်ယောက်ျားမပွားနိုင်ခြင်းကိုရောဂါလက္ခဏာမပြနိုင်ပေ။ “ မျိုးပွားရန် ရည်ရွယ်၍ ထုတ်လုပ်သောသုက်ပိုးများသည်အများအားဖြင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်ထုတ်လုပ်လေ့ရှိပြီးလက်တွေ့အခြေအနေတွင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူများသည်အများအားဖြင့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ပုံဖော်ထားသည့်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်နေစဉ်ထုတ်လုပ်လေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်မွေးဖွားမှုဆေးခန်းများတွင်ထုတ်လုပ်သောသုတ်ရည်များသည်ပုံမှန်ထက်အရည်အသွေးပိုမိုမြင့်မားနိုင်ပြီးအိပ်ခန်းအတွင်းရှိမွေးဖွားခြင်းပြproblemsနာများကိုဖုံးကွယ်ထားနိုင်သည်။ ”
ယောသပ်နှင့် Sirot အမျိုးသမီးတွေထိုးဖောက်အဖြေရှာတဲ့နှင့်ကုသမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကြဲနေချိန်တွင်ရလဒ်, အရှင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းအဘို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင်, မွေးဖွားပြဿနာများ၏ရောဂါနှင့်ကုသမှုတိုးတက်လာဖို့နည်းလမ်းတွေသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
နယူးလိင်ယောက်ျားတစ်ဦးကမြန် orgasm ပေးအဘယ်ကြောင့်
သြဂုတ် 3, 2015 04: Lizette Borreli အားဖြင့် 01 pm တွင်
ကျန်းမာသုက်ပိုးအမြဲယောက်ျားတစ်ဦးမပေးသောဖြစ်ပါတယ်။ အရေအတွက်, လှုပ်ရှားမှု, နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာအားလုံးသုက်ပိုးကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူဖြစ်စေ, တစ်ဦးမကြာသေးခင်ကအညီ လေ့လာချက် ဂျာနယ်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်စိတ်ဓာတ်သိပ္ပံဤစရိုက်များသစ်ကိုလိင်မိတ်ဖက်နှင့်အတူပြောင်းလဲလာနိုင်ပါတယ်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်တစ်ခုဝတ္ထုအမျိုးသမီးစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်ယောက်ျားရဲ့သုက်အပြုအမူနှင့်ဖွဲ့စည်းမှုအပြောင်းအလဲသရုပ်ပြဖို့ပထမဦးဆုံးနေကြတယ်" ဟုအိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်အတွက် Wooster ၏ College မှသုတေသီ, ရေးသားခဲ့သည်။
အထီးဇီဝြဖစ်စဉ်များနှင့်အမူအကျင့်ကိုသူတို့အသစ်သောမိတ်ဖက်ထိတွေ့နေသည့်အခါသြဇာလွှမ်းမိုးမှုခံရဖို့လူသိများကြသည်။ တစ်ဦး 2000 အတွက် လေ့လာချက်ဥပမာအားဖြင့်အမျိုးသားများအနေဖြင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကိုထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့ခြင်းသည်လိင်မှုကိစ္စကိုနှိုးဆွစေရုံသာမကအစာစားချင်စိတ်နှင့်စုပ်ယူမှုလည်းနည်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Self- အစီရင်ခံ arousal, ထို့ကြောင့် penile လုံးပတ်ယောက်ျားအတူတူပင်အမျိုးသမီးလှုံ့ဆော်မှုမှနေသားတကျဖြစ်လာပြီးနောက်အသစ်ကအမျိုးသမီးလှုံ့ဆော်မှုနှင့်ထိတွေ့သောအခါပိုမိုတိုးပွားလာခဲ့သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များကလူသား၏ပင်ကိုယ်ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်ဆက်စပ်နေပြီး၎င်းသည်အိမ်ထောင်ဖက်အသစ်များ၏မျက်နှာကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးသားစဉ်မြေးဆက်များထုတ်လုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းများကိုတိုးတက်စေသည်။
လက်ရှိလေ့လာမှုအဘို့, သုတေသီများယောက်ျားရဲ့သုက်စရိုက်များအကျွမ်းတဝင်သို့မဟုတ်အသစ်အမျိုးသမီးလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်ပြောင်းလဲသွားတယ်ရှိမရှိဖော်ထုတ်နိုင်ရန်ရှာဖွေခဲ့သည်။ 21 နှင့် 18 ၏အသက်အရွယ်အကြား 23 လိင်ကွဲယောက်ျားတစ်ဦးစုစုပေါင်း 48 နေ့ရက်ကာလအဘို့နာရီ 75 မှပုဂ္ဂလိကအခန်းတစ်ခန်းတိုင်း 15 ၌ခုနစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဒီယိုများစောင့်ကြည့်ဖို့စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။
ပထမဗီဒီယိုခြောက်ခုမှာမင်းသမီးနှင့်သရုပ်ဆောင်ကိုအတူတူသရုပ်ဖော်ထားပြီးသတ္တမမြောက်ရုပ်ရှင်တွင်မူမတူသောမင်းသမီးနှင့်တူညီသောသရုပ်ဆောင်ကိုပါဖော်ပြထားသည်။ ဗွီဒီယိုတစ်ခုစီသည်မိနစ် ၂၀ ကြာသောဗီဒီယိုမှ ၃ မိနစ်ကြာသောဗီဒီယိုဖိုင်များပါ ၀ င်ပြီးယောက်ျားများသုက်လွှတ်သည်အထိထပ်ခါတလဲပြသည်။
လူတို့သညျသူတို့ ejaculated ဘယျအခြိနျ, သူတို့ကရုပ်ရှင်ကိုကြည့်စတင်ခဲ့ဘယျအခြိနျမှတ်တမ်းတင်ရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်, သူတို့၏သုက်အပေါငျးတို့သတစ်ဦးစုဆောင်းမှုခွက်ကိုသို့အပ်နှံခဲ့သည်ရှိမရှိ။ အဆိုပါသုတေသီများလည်းသုက်ပမာဏ၏အချိန်နှင့်အကဲဖြတ် တစ်ဦးချင်းစီပါဝင်သူထံမှကောင်းတယ်လို့ဆိုလိုနေတယ်သုက်ပိုးအရေအတွက်။ သုက်အချို့ကိုခွက်ကိုစလုပ်မပြုခဲ့ပါကအချက်အလက်များ၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်မပါဝင်ခဲ့သညျ။
တွေ့ရှိချက်များအရသန္ဓေသားလောင်းများကိုခေါ်ယူခြင်းသည် ၄ ​​မိနစ်မှ ၂၁ မိနစ်အကြားတွင်ရှိသည်။ ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ခြောက်ခုကိုရောက်တဲ့အခါမှာလေ့ကျင့်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဆိုလိုတာကမိန်းမတစ်ယောက်တည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲကြည့်ခြင်းကသုတ်ရည်လွှတ်ချိန်ကိုတိုးမြှင့်မကျစေဘူးလို့ဆိုလိုတာပါ။ သို့သော်မိန်းမသစ်တစ် ဦး ပါ ၀ င်သည့်သတ္တမရုပ်ရှင်ကိုကြည့်သောအခါသူတို့သည်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာအရည်အသွေးမြင့်မားစွာသုတ်သင်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါသုတေသီများသည်ဤလူတို့သညျထုတ်လုပ်ရန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ခဲ့ကြသည်သံသယ ပိုမိုမြင့်မားသောအရည်အသွေးမြင့်သုက်ပိုး အကြောင်းရင်းနှစ်ခုအသစ်တစ်ခုကိုအမျိုးသမီးလှုံ့ဆော်မှုသည်။ ပထမအချက်အနေဖြင့်အမျိုးသားများကဥများကိုဥများမြေသြဇာထည့်ပြီးပြီသို့မဟုတ်သူတို့နှင့်မိတ်လိုက်သည့်အမျိုးသမီးများက၎င်းတို့၏သုက်ပိုးကိုသိုလှောင်ထားပြီဟုသူတို့ယုံကြည်ကြသည်။ ဒုတိယအချက်မှာဤတွေ့ရှိချက်များသည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ဥကိုမျိုးပွားရန်အတွက်မတူညီသောယောက်ျားနှစ် ဦး ၏သုက်ပိုးကိုယှဉ်ပြိုင်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ လူများသည်မိမိတို့၏အိမ်ထောင်ဖက်မဟုတ်သောအခြားသူများနှင့်လိင်ဆက်ဆံကြသည့်အခါများသောအားဖြင့်တွဲဖက်ပါ ၀ င်မှုပိုများနိုင်သည်။
ကျပန်းလိင်ဆက်ဆံမှုသည်လူတစ် ဦး ထက်ပိုသောလူတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုသည့်ဆန္ဒထက်မကပေါ်လွင်စေသည်။ ဒါဟာဘယ်လိုလည်းအကျိုးသက်ရောက်သည် အထီးမျိုးမပွားနိုင်ခြင်း ရောဂါနှင့်မျိုးပွားမှုနည်းစနစ်အတွက်ကူညီရန်လိမ့်မည်။ အသစ်ကအမျိုးသမီးလှုံ့ဆော်မှုကို အသုံးပြု. ကူညီမျိုးပွားမှုနည်းစနစ်များ၏ရလဒ်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေခြင်းငှါအနေဖြင့်ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပိုပြီးဆင်တူကြောင်းအပြုအမူတွေကိုမြှင့်တင်ရန်, ဥပမာ, အထီးမျိုးမပွားနိုင်ခြင်း diagnoses များ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။
ရင်းမြစ်များ - ဂျိုးဇက်၊ PN၊ Sharma၊ RK၊ Agarwal, အေ, & Sirot, LK ။ အမျိုးသားများသည်အသစ်သော Semen ပမာဏ၊ Motil Sperm ပိုမိုများပြားသောနှင့် Novel အမျိုးသမီးများ၏ပုံများနှင့်ပိုမိုထိတွေ့လျှင်ပိုမြန်ကြသည်။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်စိတ်ဓာတ်သိပ္ပံ။ 2015 ။
Koukounas E နှင့်လိင်စိတ်နိုးထ၏လေ့စဉ်အတွင်း eyeblink ထိတ်လန့်တုန့်ပြန်၏ပြင်းအားအတွက်ကျော် R. အပြောင်းအလဲများ။ အပြုအမူသုတေသနနှင့်ကုထုံး။ 2000 ။